शिलाको पत्र, शिलाजित र शिलुजाको भूमिगत जीवन -४ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← तरकारीको महिमा ‘ब्यङ्ग्यबन्ध’ (भाग १)
Three international carriers plan to link Kathmandu →
शिलाको पत्र, शिलाजित र शिलुजाको भूमिगत जीवन -४
Posted on 30/10/2011 by जय आले | टिप्पणी छोड्नुहोस्
के तिमीले मेरा कथा सुन्दैनौ शिलाजीत ? मेरा पनि तिम्रो आमाको जस्तो करुण कहानी छ, म सारा कुरा अर्को दिन सुनाउछु आज हामी शत्रु पक्षको घेरा बंदिमा छौं । हेर, जिन्दगीमा केवल एक पुरुष मैले चुनेकीछु त्यों तिमी हौ, शिलुजा के तिम्रो चाला यो ? तिमीले मेरो भावना बुझ्ने कोशीश किन गर्दिनौ ? म जीवनमा पारिबारिक बंधनको बिषयमा आफ्नो कदम कदापि रोक्न सक्दिन म आफ्नो लक्ष्यको लागी मृत्यु अगाल्न सक्छु तर यो मायावी कुरा नसुनाऊ शिलुजा ।
के सम्झेका छौ शिलाजित ? म पनि मोडर्न युवती हुँ के कम्जोरी देखेका छौ तिमी म मा ? कि कोही अर्को मनकी सुन्दरी छिन ?
मेरो धर्म पिता चेतन बाबाको ’boutमा सुनाउने छु बल्ल तिम्रो होश खुल्नेछ नेपथ्यमा कोहीरोएको आवाज सुनिन्छ बाहिरी औशीको रात अनि साउने झरी बर्षीरहेको छ खोलाको आवाज कानै दुखाउने गरि सुसाएको छ । हिजो २५ जना सहयोद्धाको बलिदानी भयो । शत्रुपक्ष तर्फ पनि ठुलै संख्यामा हताहत भएको जानकारी भएको थियो । हाम्रो संघर्षको थालनी प्रतिक्रान्तिकारीको लागि थिएन आफ्नो हकहित र समाजको लागि नया क्रान्तिकारी संस्कार निर्माणको लागि हो । मनमा धेरै कुरा खेलाई रह्यो शिलाजितले के भयो शिलाजित किन चिन्ताग्रस्त ? खुला हौ तिमी हेर मैले त भुलेछु तिम्री आमाले एकजना सहकर्मीको साथ चिठ्ठी पठाउनु भएको रहेछ ल लेउ चिठ्ठी दिदै शिलाजितको अचानक दुइ थोपा आशुं गहबाट खस्छन । भावविभोर हुदै पत्र खोल्छ शिलाको पत्र पुत्र शिलाजितलाई ।
मेरो जीवनको दिप, मेरो मुटुको टुक्रा..
दिनांक २०११-११-११ चेतननिवास
असिम प्यार शुभाशिर्बाद,
शिलाजित तिमी घरबाट निस्के देखि चेतन बाबा कति दुखित हुनु भएको छ ? हेर जस्ले तिमीलाई आफ्नो सन्तानको रुपमा अपनाउनु भयो अनि तिमीलाई एक सक्षम नागरिक बनाउने कत्रो चाहना थियो ? तिमी एकपटक पनि घरबाट निस्कनु अघि आफ्नो कुरा भन्नु थियो । सुनेकी छु तिमीले आफ्नो क्रान्तिकारी यात्रामा आफ्नो संघर्ष जारी राखेका छौ रे ? हेर, धेरै पटक गृहयुद्ध भए नेताहरुले सत्ता भोगे ति संघर्षको मैदानमा लडेका ति नेपालीको बलिदानको अर्थ के भयो ? हेर बालक तिमीले जे जस्तो कायपटल गरे पनि जस मिल्दैन यो स्वार्थीको घर र घारको जमिन हो । तिमी जहा छौ फर्क पुत्र ? क्रमश…
प्रगतिनगर, नवलपुर, नवलपरासी लुम्बिनी, नेपाल
हाल: लिस्बोन पोर्तुगल (२०११-१०-२१)
This entry was posted in कथा/लघुकथा, कहानी/उपन्यास. Bookmark the permalink.